asalsashan » नेपालगञ्जमा चक्रपथ ! नेपालगञ्जमा चक्रपथ ! – asalsashan
नेपालगञ्जमा चक्रपथ !
नेपालगञ्ज, असार १३ गते/नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा चक्रपथ विकासका लागि आवश्यक पहल गर्ने भएको छ ।
बिहिवार भएको ९ औं नगरसभामा बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाले भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथकिता दिइएको बताउनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाले सम्पूर्ण वडामा भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ । वडा नम्बर ६ मा क्रिक्रेट रंगशाला निर्माणलाईअ गाडी बढाउन आवश्यक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । वडा कार्यालयहरुलाई पक्कि सडकले जोडिने र सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्दा अपांगमैत्री हुनेगरि निर्माण गरिने भएको छ ।
नाला नभएका ठाउँमा नाला र नाला सहितको कालोपत्रे पिसिसी र ग्राभेल गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सुर्खेतरोडको दायँबायाँ नाला नभएको स्थानमा ब्यवस्थित पक्कि नाला बनाउनका लागि आवश्यक पहल गरिने नगर प्रमुख राणाले बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा महनगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइएको छ । महानगरका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गाको ब्यवस्थापन गर्ने र संरचना निर्माणका लागि डिपिआर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसैगरी नगर स्तरीय ठुला योजनाहरुको प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरि आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु गर्न पहल गरिने, रात्रिकालिलन बजारको पूर्वाधार निर्माणका लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेपालगञ्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पहल गर्ने, नगरबासीलाई स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच पुर्याउनआवश्यक पहल गरिने भएको छ ।
जेष्ठ नागरिकहरुको ज्ञान,सिप र धारणा र अनुभवहरुको समन एवं प्रयोगका लागि जेष्ठ नागरिक संजाल गठन गरि आवश्यकता अनुसार दिवा सेवा केन्द्र संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यसैगरी गल्फ कोर्ष निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।